Ukuphupha amaza Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ulwandle oluzolileyo lolona lukhululekileyo ekuweleni. Ukuba amaza ayavuka kwaye nolwandle luya lusomelela, inqanawe iyaxakaniseka kwaye abanye abakhweli baziva bengakhululekanga kangangokuba baba nesiyezi. Ngamaza aphakamileyo kakhulu kunokwenzeka ukuba indawo enezikhukula izaliswe ngamanzi.
Yintoni enokubangela iingxaki kumaphenyane ngumceli mngeni kwezinye iimbaleki. Umzekelo, abaqhubi bamaza bathanda amaza aphezulu kwaye bahlala belinde ukudumba okufanelekileyo ukuze bakwazi ukuziqhelisa imidlalo yabo. I-tsunami yintlekele yendalo esongela imeko yomhlaba olwandle okanye ulwandle, izilwanyana kunye nabantu abahlala apho. Amaxesha amaninzi abafileyo baginyiswa ngamaza aphakame kangangeemitha.
Amanzi kunye namaza aqhelekile njengemifanekiso yamaphupha kwaye anokuchazwa ngokwahlukileyo. Ngokubanzi, yimeko yemida ekufuneka ithathelwe ingqalelo kutoliko oluchanekileyo. Ke yonke eminye imifanekiso yamaphupha kufuneka iqale ifunwe kwaye itolikwe ngophando lwethu, umzekelo, ulwandle okanye iinqanawa ezivele ephupheni.
Amaza anokuvela nakwezinye iimeko, oko kukuthi, xa sidibanisa iinwele zethu, umzekelo, sizenza ngohlobo lweliza. Ke ngoko, ekutolikeni amaphupha, umntu kufuneka aqwalasele zonke iisimboli kunye.
Emva koko, siza kuqala ukwazisa ngamaphupha axhaphakileyo ahambelana nomfanekiso «amaza»:
1 Uphawu lwephupha «amaza» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Amaza abetha elwandle ngathi liphupha
1.2 Ukukhangela ephupheni, kumnandi kangakanani!
1.3 Iintlekele zendalo: uphawu "amaza" kubusuku obubi
1.3.1 Umhlaba ongezantsi! Amaza akhukulisa ulwandle olunephupha
1.3.2 Amaza aphezulu kunye amakhulu: uphawu lwephupha «tsunami wave»
1.4 Idama lokutshangatshangisa: amaza okwenziwa kunye nentsingiselo yamaphupha akho
2 Uphawu lwephupha «amaza» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «amaza» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «amaza» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «amaza» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Amaza abetha elwandle ngathi liphupha
Amaza emanzini abhekisa kumaxesha oxinzelelo ekuchazeni amaphupha. Imiceli mngeni emininzi ilindele umntu oleleyo. Kufuneka ujongane neengxaki ongakhange uzicinge. Kwangelo xesha, iphupha apho amaza olwandle aqhekeka kufuneka alumkise ngeempazamo. Ngaphandle koxinzelelo, umntu ochaphazelekayo kufuneka alumke angathathi izigqibo ezingalunganga.
Ukukhangela ephupheni, kumnandi kangakanani!
Ukuntywila kumaza ngokuqinisekileyo akukho lula, kodwa kwabaninzi kuselulonwabo olukhulu. Njengophawu lwamaphupha, ukuntywila emanzini kubonisa inqanaba lokonwaba lobomi kunye nokulingana ngaphakathi. Rhoqo ukubhabha ephupheni kukwazisa utshintsho oluqinisekileyo kubomi bokulala.
Iintlekele zendalo: uphawu "amaza" kubusuku obubi
Umhlaba ongezantsi! Amaza akhukulisa ulwandle olunephupha
Ukuba amaza ephupha abangela umkhukula elunxwemeni, unokuwa phantsi komthwalo wobomi bemihla ngemihla kwaye uphulukane nolawulo. Umntu oleleyo unengxaki yokuphakama koxinzelelo, akalungelelananga kwaye uxakeke ngokweemvakalelo. Ufuna ixesha elingxamisekileyo ukuze achache ukuze azifumane kwakhona.
Amaza aphezulu kunye amakhulu: uphawu lwephupha «tsunami wave»
Amaphupha apho amaza amakhulu kakhulu kwaye ephezulu kwaye ajike abe yitsunami ngokubanzi abhekisa kwilizwe lakho leemvakalelo. Lowo uleleyo woyiswa yimeko ethile ebomini bakhe. Kwimeko embi kakhulu, kukho umngcipheko wokuphazamiseka ngokweemvakalelo. Iphupha lokutshangatshangiswa ngamaza kufuneka lenze umntu ukuba abone ukungalingani kwangaphakathi okukhoyo; Ukuphakama nokuphakama kweliza el mundo yamaphupha, engenakoyiswa ngakumbi ikwakhona nentaba yeengxaki ezilala emphefumlweni.
Idama lokutshangatshangisa: amaza okwenziwa kunye nentsingiselo yamaphupha akho
Njengophawu lwephupha, ichibi lokutshangatshangiswa libonisa indlela yokujongana neemvakalelo zakho. Isigqibo esinqumayo apha kukuba liphupha elilungileyo okanye liphupha elibi: Kuxhomekeke kumava athile ephupha, ichibi lokutshangatshangisa kufuneka likhuthaze ukuvuleleka okukhulu kwiimvakalelo zakho okanye litsale ingqalelo kwimfuno yolawulo olukhulu.
Uphawu lwephupha «amaza» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba amaza aphakamileyo kwihlabathi lamaphupha, oku kuhlala kuyinto ebonisa ukuba awunakuphumla okwethutyana kubomi bokuvuka bephupha. Izandla zakhe zixakekile zifikelela apho aya khona ngaphandle kwamaza. Oku Isiphithiphithi ebomini ngamanye amaxesha bayakhutshwa ephupheni ngumoya onamandla okanye isaqhwithi.
Ukuba umsinga uza neliza elikhulu, unzulu. utshintsho kulindeleke kubomi bomphuphi.
Ukuba iphupha lijonga amaza ngelixa silele, ke uhlobo lomtshangatshangiso kunye nobume bamanzi yinto ebalulekileyo ekutolikeni iphupha elo. Ukuba amaza ngamanzi acocekileyo enza amaza, oko ke luphawu oluqinisekileyo. Iphupha lophando liguqulela lo mfanekiso wephupha njengophawu lwesigqibo esibalulekileyo, esinceda iphupha kunye naye. entsha i ngcebiso izakuzisa.
Nangona kunjalo, ukuba amaza arhabaxa kwaye amanzi amdaka kakhulu, olu phawu lunye isilumkiso xa uphupha. Ukuba awulumkanga, uya kwenza impazamo enkulu.
Uphawu lwephupha «amaza» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwamaphupha, ulwandle lutolikwa njengophawu lukanina. Ukuba umntu uhlaselwe ngumtshangatshangiso ephupheni aze umntu ophuphayo abanjwe liliza elimginya njengamaza amakhulu okanye amrhuqele enzulwini, ke lo mfanekiso wephupha ubonakalisa ubudlelwane bakhe i-madre. Kule meko, uziva ecinezelwe kwaye elawulwa ngunina kwihlabathi elivukayo. Akanamandla kuye, kodwa akathandi ukumphikisa. Ukuphupha kukwavakalelwa ngolu hlobo xa kufuneka ulwe namaza ephupheni lakho kwaye uphulukane nomlo.
Ukuba iphupha liqubha kulwandle olufudumeleyo kwaye kwanamaza aluqilima emanzini anzulu awakwazi ukulonzakalisa okanye ude ukhwele kuwo kwaye ulonwabele, ke le mifanekiso yamaphupha iyakuvumela ungene. ubudlelwane obuhle funda kunina.
Uphawu lwephupha «amaza» - ukutolika kokomoya
Amaza ekuchazeni amaphupha okomoya njengophawu lwe Amandla obomi Itolikiwe